DAAWO:-Liverpool Oo Guul Muhiim Ah Ka Gaartey Arsenal +SAWIRRO | Wardoon
Home Sports News DAAWO:-Liverpool Oo Guul Muhiim Ah Ka Gaartey Arsenal +SAWIRRO
Kooxaha Liverpool iyo Arsenal ayaa ciyaaro aad u culus isla markaana mid walba qiima gaar ah ugu fadhisey kuwada ciyaarey garoonka Imarates ee ay Arsenal ku ciyaarto kuna yaala waqooyiga magaalada London.
labadan kooxood ayaa ciyaarta soo galay iyadoo mid walba ay maskaxda ku heyso in mida kale ay guul ka gaarto maadama Liverpool-na ay aad u dooneysey soo yareynta farqiga 4-ta dhibcood ah ee ay Man city ka horeyso isla markaana horyaalka u tartanto, halka Arsenal ay iyaduna dooneysey in ay sii fogeysato dhibcaha farqiga ay ku si fadhiso booska 4aad ee loogu soo baxo Champions League-ga.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa ku bilaabatey carcar xoogan oo ay Arsenal wado iyadoo abuurtey fursado dhowr ah, laakin waxaa ku adkaatey in ay fursadahaasi natiijo u bedesho.
Dhanka Liverpool lafsad ahaanteeda qeybtii hore kubad ahaan ma aysan liidanin laakin xoogaa fursahaha kuma aysan badneyn taa bedelkeedana waxaa ay u muuqdeen kuwa ciyaarta qiimeynaya oo taagan.
Si kastaba qeybtii hore waxaa ay ku dhamaatey barbaro goolal la’aan ah oo labada kooxoodba ay nasiinayada qeybytaasi ay ku aadeen.
Qeybtii labaad ayaa la isugu soo noqdey ciyaarta Liverpool markan waxaad moodaa in qaabka ay ku soo gashey ay aheyd fursad walba oo aad heshaan ka faaideysta oo waxba ha reebanina.
Arsenal dhankeeda iyaduna diyaar ayeey u aheyd in ay dadaalkeda sii wado, labada dhinacba fursado fiican ayeey abuureen daqiiqadii hore ee qeybtii labaad.
Nasiib wanaag taageerayaasha Liverpool ayaa mar keliya farxad ku qeyliyey daqiiqadii 54aad ee ciyaarta kadib markii gool aad u qurux badan uu ka dhaliyey weeraryahanka reer Portugal Diego Jota ciyaartana ka dhigey gool iyo waxba oo ay Liverpool ku hogaamineyso.
Isla daqiiqadii uu dhaliyey goolka Jota aya bedel loo taagay macalin Klopp oo aad mooda in ciyaarta uu aqriyey ayaa Firmino soo galiyey.
Wax ka yer 10 daqiiqo ayeey Firmino ku qaadatey in uu ciyaarta goolkii labaad u dhaliyo kooxdiisa Liverpool kadib markii fursad fiican oo uu heley uu gool u bedeley daqiiqadii 62aad ciyaartana ka dhigey laba gool iyo waxba oo ay hogaanka ku heyso Liverpool..
Arsenal dadaal badan ayeey sameysey kadib goolashaasi, laakin dadaal walba oo ay sameyaan waxaa diidey xiddigaha Liverpool oo kooxdooda u diidey in farqigaasi laga soo yareeyo.
Dadaal walbaba Arsenal waa ay ku adkaatey in ay goolashaasi soo gudaan ciyaarta ayaana ugu dambeyn ku dhamaatey laba gool iyo waxba oo ay guusha ku raacdey kooxda Liverpool.
Previous articleYaa leh awooda dhaarinta xildhibaannada?
Next articleAkhriso liiska Musharaxiinta beri ku tartameysa Lix kursi oo taal Garoowe
Arsenal oo guul ay u baahnayd ka gaadhay Wolves +SAWIRRO
Eden Hazard Oo Saadaaliyay Kulanka Chelsea & Man City Ee Premier...
RASMI: Isku Aadka Euro 2020 Oo La Soo Saaray & Portugal...